Kutheni Iingxaki Zobundlobongela Kunzima Ukuzichonga
Imiba Imbali Nezizathu
Iingxaki zoLwazi lwezizathu zoBugcisa
Iingxaki zoBugcipheko Ukutshintsha ixesha
Izinto ezibangela ubundlobongela zibonakala zingenakwenzeka ukuba umntu achaze. Nesi sizathu sokuba: batshintsha ixesha. Ukuphulaphula izigubhu kwixesha elihlukeneyo kwaye uya kuziva iintetho ezahlukeneyo. Emva koko, phulaphulaphula abaphengululi abachazela ubugrogasi. Iingcamango zabo ziguquka ngexesha elide, njengoko iindlela ezintsha zokucinga zifunda.
Abalobi abaninzi baqala iingxelo malunga "nezizathu zobuglogongela" njengokungathi ubugrogusho bezinto zesayensi ezizimeleyo zazo zonke izihlandlo, njengezizathu 'zesifo, okanye' izizathu 'zokwenziwa kwamatye.
Ubugwenxa abuyinto engokwemvelo nangona kunjalo. Leli gama linikezwa ngabantu malunga nezinye izenzo zabantu kwilizwe lezenhlalakahle.
Zibini izigubungela kunye nokuchazwa kwezigubungela zithonyelwa yimigqaliselo ebalulekileyo kwezopolitiko nangengcamango. Izigulane-abantu abasongela okanye basebenzise ubundlobongela kubantu abaphila nethemba lokutshintsha imeko-quo-baqonde isimo salo ngeendlela ezihambelana nexesha abahlala kuyo. Abantu abachaza ubugrogmo baphinde baphenjelelwe yimimandla ebonakalayo kwimisebenzi yabo. Ezi ntshukumo ziguquka ngexesha.
Ukubukela imiGudu yoBugcisa kuya kunceda ukuSombulula
Ukubukela ubugorha njengophawulo olungaphezulu kweendlela eziqhelekileyo kusinceda siqonde, kwaye ke sifune isisombululo kuye. Xa sibheka amagebengu njengento engalunganga okanye ngaphaya kweengcaciso, asiyiyo kwaye asixhasi. Asikwazi 'ukulungisa' ububi. Singahlala nje sinoyika ngokwesithunzi. Nangona kungonwabi ukucinga ngabantu abenza izinto ezimbi kubantu abamsulwa njengenxalenye yehlabathi lethu elifanayo, ndiyakholwa ukuba kubalulekile ukuzama.
Uza kubona uluhlu olungezantsi ukuba abantu abakhe ukhetho lobuphekula kwikhulu leminyaka elidlulileyo baye baphenjiswa yimizila efana nayo sonke esinayo. Ukwahlukana kukuba, bakhetha ubudlova njengempendulo.
1920s - 1930: I-Socialism njengesizathu
Ekuqaleni kwekhulu lama-20, iziglogongela zivakalisa ulwalamlo egameni le- anarchism, intlalo-ntlalo kunye ne-communism.
I-Socialism yayiba yindlela ebalulekileyo kubantu abaninzi ukuba bachaze ukungabi nabulungisa kwezopolitiko nakwezoqoqosho ababonayo ekuphuhliseni kwiinkampani ezinkulu, kunye nokuchaza isisombululo. Izigidi zabantu zivakalise ukuzibophelela kwabo kwixesha elizayo lezenzo zentlalo ngaphandle kobundlobongela, kodwa inani elincinci labantu behlabathi becinga ukuba ubundlobongela buyimfuneko.
Ngama-1950 ukuya kuma-1980: Ubuzwe njengesizathu
Ngama-1950 ukuya kuma-1980, ubundlobongela bombundlobungela bekube neqela lelizwe. Ubundlobongela bezobugqirha kule minyaka ibonakalisa indlela yokugqibela yeMfazwe yehlabathi emva kokuba abantu ababesicinezelekileyo babenza ubundlobongela kwilizwe abangazange banikeze ilizwi kwinkqubo yezopolitiko. Ugqirha wase-Algeria ukulwa nolawulo lwesiFrentshi; Ubundlobongela baseBasque malunga nesimo saseSpain; Izenzo zaseKurdish malunga neTurkey; AmaPher Panthers kunye namagorha asePuerto Rican eUnited States bonke bafuna ingqungquthela yokuzimela ngaphandle kolawulo olucinezelayo.
Abaphengululi beli xesha baqalisa ukufuna ukuqonda ubugqirha ngokweemeko zengqondo. Babefuna ukuqonda oko kwashukumisa abantu ngabanye. Oku kuhambelana nokunyuka kwengqondo kunye nokugula kwengqondo kwezinye iindawo ezihambelanayo, ezifana nolwaphulo-mthetho.
Ema-1980-namhlanje: Iimfundiso zeNkolo njengesizathu
Ngama-1980 kunye no-1990, ugqirha lwaqala ukuvela kwi-repertoire yephiko elifanelekileyo, i-neo-Nazi okanye i-neo-fascist, amaqela obuhlanga.
Njengabalingisi bamaphekula ababengaphambi kwabo, la maqela anobundlobongela abonakalisa umda ogqithiseleyo wobuninzi obungekho-obunobundlobongela obunobundlobongela ngexesha lophuhliso lwamaxesha oluntu. Ngokusemthethweni, amadoda aseNtshona, aseYurophu okanye aseMelika, ngakumbi, ayesaba ihlabathi eliqala ukunika inkxaso, amalungelo opolitiko, ukuthengwa kwemali kwezoqoqosho kunye nenkululeko yokuhamba (ngendlela yokufuduka) kwiintlanga ezincinci kunye nabasetyhini, obonakala ngathi bathabatha imisebenzi kunye nesimo.
EYurophu naseUnited States, nakwezinye iindawo, ii-1980 zazithethwa ngexesha apho uluntu lwentlalontle landisiwe eUnited States naseYurophu, ukunyanzeliswa kwamanyathelo oluntu kwamanye amazwe kuye kwavelisa iziphumo, kunye nehlabathi, amaqumrhu kazwelonke, aqhubekile, ukuvelisa ukungcola kwezoqoqosho phakathi kwabaninzi abaxhomekeke kwimveliso yokuphila.
Ibhomu likaTimothy McVeigh leZakhiwo saseForgan Building yaseKorea , ukuhlaselwa kwesigebengu esibuhlungu kakhulu e-US kude kube kuhlaselwa kwe-9/11, kubonisa indlela yokuziphatha.
EmaMbindi-Mpuma , i-swing efanayo eya kwi-conservatism yayibambelela kuma-1980 nakuma-1990, nangona yayijongene nobuso obuhlukile kunokuba yenziwe kwiidemokhrasi zaseNtshona. Inkqubo yomhlaba, isondo senzululwazi esasibangele umhlaba jikelele - ukusuka eCuba ukuya eCichicago ukuya eCairo - yaphela emva kwemfazwe yama-Arabhu ne-Israel ye-1967 kunye nokufa ngo-1970 kuMongameli waseGibhithe uGamal Abd-Al Nasser. Ukungaphumeleli kwimfazwe ka-1967 kwakunzima kakhulu-iArabs ephazamisekile malunga nexesha lonke le-Arabism.
Ukunyuka kwezoqoqosho ngenxa yeMfazwe yaseGulf kuma-1990 kwabangela abaninzi basePalestina, abaseYiputa kunye namanye amadoda asebenza ePersian Gulf ukuba alahlekelwe yimisebenzi. Xa bebuyela ekhaya, bafumana abafazi babecinga imisebenzi yabo emakhaya nasemisebenzini. I-conservatism yezenkolo, kubandakanywa nembono yokuba abafazi kufuneka babe thobekile kwaye bangasebenzi, babambe kule moya. Ngale ndlela, iWest neMpuma yabona ukunyuka kwezinto ezisemgangathweni kuma-1990.
Abaphengululi bezobugqirha baqala ukuqaphela ukunyuka kolwimi lwenkolo kunye nokuqonda ngokukhuselana. IJapan Aum Shinrikyo, i-Jihad yama-Islam eYiputa, kunye namaqela afana ne-Army of God e-United States ayenelungelo lokusebenzisa inkolo ukunyanzela ubundlobongela. Inkolo yindlela eyona ndlela ulwaphulo-mthetho luchazwe namhlanje.
Ixesha elizayo: Ingqongileyo njengesizathu
Iifom ezintsha ezintsha kunye neenkcazelo ezintsha ziyaqhubeka, nangona kunjalo. Intshisekelo ekhethekileyo yongongophe isetyenziselwa ukuchaza abantu kunye namaqela awenza ubundlobongela ngenxa yesibango esithile.
Ezi zinto zihlala zendalo kwendalo. Abanye baqikelela ukuphakama kobugqirha 'obuluhlaza' eYurophu - ukuxhatshazwa kwintlanzi egameni lomgaqo-nkqubo wendalo. Amalungelo okulwela amalungelo ezilwanyana aphinde abonakalise umgca onobundlobongela. Njengokuba kwimiba yangaphambili, ezi ntlobo zobundlobongela zifana neengxaki ezibalulekileyo zexesha lethu kwiinkalo zezopolitiko.
Imfazwe e-Afghanistan - iMbali emva kweMfazwe yase-US e-Afghanistan
U-1968 PFLP ukuxotshwa kwe-El Al Flight
NgoSeptemba 11, 2001
I-University of Bowie State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Wonke umfazi oye wambona uNksz Olympia Ngonyaka